Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy A71 sau 3 tháng sử dụng | Muasalebang - Muasalebang
Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy A71 sau 3 tháng sử dụng | Muasalebang
Đang Đọc: Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy A71 sau 3 tháng sử dụng | Muasalebang in Muasalebang
I-Galaxy A71 iyi-smartphone enezici eziningi “zokuhlola” nemiklamo ye-Samsung. Ngakho ingabe le divayisi iletha ngempela ukuzizwisa okuhle?
Eyethulwe ekuqaleni kuka-2020, i-Galaxy A71 iyi-smartphone “ehlolwayo” i-Samsung ngomklamo omusha wochungechunge lwe-Galaxy S20 kanye nobuchwepheshe obuningi obuhlonyiswe okokuqala. Ukubukeka okukhangayo, iqoqo lekhamera elinamaphuzu amaningi athakazelisayo nokucushwa kwe-hardware okungaphezu kokwanele cishe noma yimuphi umsebenzi, yilokho “esikuzwile” mayelana nale divayisi.
Ngakho liyini iqiniso, ake silandele ukubuyekezwa kwe-Sforum ngezansi mayelana nale smartphone ngemva kwezinyanga ezi-3 zokusetshenziswa.
1 Idizayini ukuze kube lula
2 Isibonisi sihle, sifinyelela umkhawulo ophelele
3 Imingcele yokumisa iyafana nomuzwa
4 Ukuthatha izithombe okuguquguqukayo, ukukhohlisa okuncane
Idizayini ukuze kube lula
Iphuzu lokuqala esizoxoxa ngalo lapha ukuklama kwale smartphone. Uma kuqhathaniswa namadivayisi ochungechunge lwe-Samsung A ngo-2019, i-Galaxy A71 ayenzi impumelelo eminingi kakhulu ngokuya ngokubukeka. Endaweni ethile kuseyisitayela sangemuva nephethini eqoshiwe yedayimane ye-3D ehlanganiswe nekhono lokushintsha umbala ngokuya ngama-engeli ahlukene wokubuka.
Kodwa-ke, okugqamile lapha ukuthi uchungechunge lwe-Galaxy A 2020 seluqalile ukusebenzisa ukwakheka kwesikrini esinembobo esizuzwe njengefa ochungechungeni lwe-Galaxy S ne-Note ephezulu. Ngokuhambisana nalokho iqoqo lekhamera elingemuva elihlelwe ngomumo ongu-L, libekwe kuhlaka oluwunxande ekhoneni elingakwesokunxele. Lona umklamo oyisithombe womndeni wakwa-Sam kuma-smartphones amaningi aphakathi nobubanzi futhi ngaphezu kwalo nyaka, okwenza umehluko uma uqhathaniswa neminye imikhiqizo emakethe.
I-Galaxy A71 ifakwe ipulasitiki emuva, ngakho-ke izwakala ilula impela, kanye nayo izacile kakhulu i-7.7mm kuphela, yize ifakwe ibhethri elikhulu. Uma sibheka isipiliyoni sokubamba, lo mkhiqizo awukhululekile ngokwanele, awulethi umuzwa ophezulu.
Isibonisi sihle, sifinyelela umkhawulo ophelele
Uma sikhuluma ngesipiliyoni sesikrini, lokhu kuyinhlanganisela enkulu ye-Galaxy A71. Lo mkhiqizo ulandela isitayela esifanayo sokuklama isikrini se-Infinity-O esisukela konqenqemeni ukuya konqenqemeni njengefulegi le-Galaxy Note 10 eyethulwe ngonyaka odlule, ngaleyo ndlela usize ukuthuthukisa isilinganiso sesikrini nomzimba ngenkathi iletha umuzwa wokunethezeka. , vele uhlangabezane nesipiliyoni esihle. inani.
Mayelana nekhwalithi yesikrini, ngicabanga ukuthi okulethwa yile smartphone yebanga eliphakathi akukhona okungaphansi kwe-Galaxy Note 10. Ngokukhethekile, i-Galaxy A71 inosayizi wesikrini omkhulu ongu-6.7-intshi we-Super AMOLED, ukulungiswa kwe-Full HD +. , ukuminyana kwe-pixel 393 ppi wezithombe ezibukhali, ezinemininingwane nemibala ethophayo.
Ngokuhambisana nalokho, isikrini ku-Galaxy A71 sinokukhanya okuhle kakhulu, okufika ku-nits ezingaphezu kuka-630. Enqubweni yokusebenzisa le “em”, ngizame ukusebenzisa i-Google Amamephu ukuze ngibheke umgwaqo emini, izimo ezishisayo nelanga, futhi umphumela omangalisayo ukuthi yonke into iboniswa kahle kakhulu.
Yize inekhwalithi enhle, kimina, isikrini se-Galaxy A71 sisenephuzu lokususa ngokuya ngomklamo, okuyindawo “yemvukuzane” lapho ikhamera ye-selfie ikhona. Ngoba ngike ngasebenzisa i-Galaxy A51 ngaphambilini, ngizwa sengathi usayizi wemvukuzane usemkhulu impela, kuyilapho lokhu kuyithuluzi elithuthuke kakhulu. Sekukonke, izinga lokuchichima le-Galaxy A71 lisephezulu impela, i-bezel ibhokile futhi yinhle.
Le smartphone futhi ifakwe inzwa yezigxivizo zeminwe esikrinini enekhwalithi nesivinini esithuthuke kakhulu uma kuqhathaniswa nesizukulwane esidala se-Galaxy A70 esinobunikazi obusheshayo nobunembile. Eqinisweni, kungithathe ngaphansi kwesekhondi elingu-1 ukuvula isikrini, ngokuthinta okukodwa nje.
Sekukonke, i-Galaxy A71 kufanele iziqhenye ngesikrini esingesaso: Idizayini enhle, yesimanjemanje, ikhwalithi yokubonisa engekho ngaphansi kwefulegi elinobuchwepheshe bokuvula okusheshayo nobuhlaba umxhwele.
Imingcele yokumisa iyafana nomuzwa
Ikhuluma mayelana nokucaciswa kwehardware, i-Samsung Galaxy A71 ifakwe phakathi kwebanga eliphakathi le-Snapdragon 730 octa-core processor, lapho ama-cores ama-2 acishwa ku-2.2GHz kanye nama-cores ayi-6 acishwe ku-1.8GHz, ahlanganiswe ne-8GB ye-RAM nememori. ku-128GB. , inhle impela ebangeni lentengo ngaphansi kwezigidi eziyi-10. Ungakwazi futhi ukwandisa umthamo wememori usebenzisa i-slot yekhadi le-microSDXC.
Ngephrosesa ehamba phambili esigabeni esimaphakathi nebanga, umthamo omkhulu we-RAM nenkumbulo ephezulu, le divayisi ingakwazi ukuphatha kahle yonke imisebenzi yansuku zonke yabasebenzisi, kusukela ekusengeni iwebhu, ukubuka amamuvi, ukulalela umculo noma imbala Dlala imidlalo ngaphandle kokuqandisa.
Ngizamile ukudlala imidlalo yanamuhla edumile efana ne-Lien Quan Mobile noma i-PUBG Mobile, futhi nginomuzwa wokuthi i-Galaxy A71 ikufanele ukwenza lokho. Umdlalo awunakho ukunensa noma ukushisa ngokweqile, noma ngabe usethelwe ku-FPS ephezulu. Ukunyakaza kwesithombe kugeyimu nakho kuyashelela futhi kuyathopha.
Mayelana nomthamo webhethri, i-Galaxy A71 inebhethri elikhulu lomthamo, elifika ku-4,500mAh, elihambisana nokushaja okusheshayo okungu-25W. Ngale mpilo yebhethri, ngingayisebenzisela ukusebenza futhi ngidlale usuku lonke ngaphandle kokukhathazeka ngokuphatha ishaja.
Ngemuva kokuhlola imisebenzi eyisisekelo njengokudlala imidlalo, ukubuka i-YouTube, ngithole ukuthi i-Galaxy A71 ingasebenza cishe izinsuku eziyi-1.5 ngaphambi kokuthi ikhokhiswe ngokusetshenziswa okuvamile. Ikakhulukazi uma ungasebenzisi ngokuqhubekayo futhi iningi loxhumano lwe-wifi esikhundleni se-4G mhlawumbe isikhathi singahlala izinsuku ezi-2.
Ikakhulukazi, ukusetshenziswa kwebhethri kwedivayisi nakho kuyamangaza. Ngenze isivivinyo esincane ukuhlola ukusetshenziswa kwamandla kwe-Galaxy A71 ngemisebenzi emi-2 eyisisekelo ehlanganisa: Ukubuka amavidiyo e-YouTube nokudlala imidlalo. Umsebenzi ngamunye wenza ngokuqhubekayo imizuzu engama-30 kusetshenziswa uxhumano lwe-4G. Imiphumela ikhonjiswe kuthebula elingezansi.
Okunye ukuhlolwa kwe-GSMArena kufakazela ukuthi i-Galaxy A71 iyi-smartphone enempilo enhle yebhethri. Ucingo lungahlala amahora angu-13 wokusefa iwebhu, ngaphezu kwamahora angu-17 wokudlala ividiyo futhi namahora angaphezu kuka-30 wezingcingo.
Ngaphezu kwalokho, bengilokhu ngisebenzisa le divayisi cishe izinyanga ezi-3 ngokuvama okuminyene, imisebenzi nayo miningi, kepha impilo yebhethri ye-Galaxy A71 isaphendula ngokuphelele, akukho engingakhononda ngakho. .
Ubuchwepheshe bokushaja ngokushesha futhi buyasiza ukunikeza ulwazi olunzulu ngomsebenzisi olungcono, idivayisi ingashaja ibhethri elingafika ku-70% phakathi kwemizuzu engu-60. Lokhu kuhlanganisa okukhulu ngoba idivayisi inomthamo omkhulu webhethri futhi futhi kuyinto engcono kakhulu engizizwa nge-Galaxy A71, noma ingeyona eshesha kakhulu kodwa enhle ngokwanele ukunganelisa.
Ukuthatha izithombe okuguquguqukayo, ukukhohlisa okuncane
Amandla okuthatha izithombe angenye yezinto ezibaluleke kakhulu ku-Galaxy A71. Idivayisi iphethe iqoqo lamakhamera amise okwe-L angu-4 anomklamo oyi-convex, cishe ngaphezu kuka-1mm. Imininingwane yaleli qoqo lekhamera ihlanganisa ikhamera eyinhloko engu-64MP ye-engeli ebanzi, ikhamera ye-ultra-wide-angle engu-12MP, ikhamera enkulu engu-5MP kanye nenzwa yokujula engu-5MP, esekela umsebenzi wokuthatha izithombe ukuze kukhishwe amafonti kanye nesibani esisodwa.
Ihlola amandla okuthatha izithombe, ezimeni ezikhanyayo ngokwanele, i-Galaxy A71 idala kalula izithombe ezibukhali, ezinemininingwane eminingi. AbakwaSamsung benze ngokuzenzakalelayo kuzo zonke izinto ezibalulekile, ngakho-ke noma ngabe ukudubula ekukhanyeni okuphansi noma ukukhanya okukhanyayo, isithombe sokugcina kuselula kakhulu ukusibona. Ukulungiswa okuphezulu kwenza kube lula ukudala izithombe ngezinjongo zokuphrinta noma zangemuva kokukhiqiza.
Ishothi elikhanyayo ngokwanele le-Galaxy A71
Mayelana nombala wesithombe, sijwayelene kakhulu nesitayela esithophayo se-Samsung futhi i-Galaxy A71 nayo iyafana. Isistimu yokucubungula izithombe yesofthiwe enesici esibizwa ngokuthi “I-Scene Optimization” isiza i-A71 ukuthi ibone umongo owuthwebulayo, ngaleyo ndlela yenza izinguquko kumbala nokukhanya ngokufanele. Lesi sici sisebenza ngazo zombili ikhamera eyinhloko kanye nekhamera ye-ultra-wide-angle.
Ezimweni eziphansi zokukhanya, ngenxa yembobo enkulu, i-A71 isaphethe imininingwane eminingi, kodwa ayihlazisi kakhulu. Isithombe sinomsindo futhi angilijabuleli ikhono lokudubula elikhanyayo eliphansi lale divayisi.
Ishothi yasebusuku ngaphandle kokuthi Imodi Yasebusuku ivuliwe
Ngaphezu kwalokho, abasebenzisi bangasebenzisa imodi “Yokudubula Kwasebusuku” ukuthuthukisa ikhwalithi yesithombe. Kodwa-ke, ekuhloleni kwami, lesi sici siwusizo kuphela lapho sidubula izinto ezimile futhi sixaka kancane ukusisebenzisa ngoba kufanele sibambe izandla zethu ngokuqinile cishe imizuzwana emi-3. Ngezithombe ezihambayo, ikhono lokuthwebula ukugxila alilungile. Isithombe semodi “Yokudubula Ebusuku”, nakuba kunokuthuthuka okuningi uma kuqhathaniswa nokudubula okuvamile, asanele ukunganelisa.
Mayelana nesici sokudubula esikhulu, okugqamile i-Samsung eyiphromotha kakhulu kule divayisi yebanga eliphakathi, ingabe okuhlangenwe nakho kwangempela kuyafana nalokho esikuzwayo? Ukuhlola kwami ​​​​okuvamile ukuthi ikhono lokudubula elikhulu le-Galaxy A71 lisezingeni elihle, izithombe ezidaliwe zinhle impela futhi ziyanganelisa ngokwanele kimi.
Kodwa-ke, iphuzu lokususa liwukuthi kuzodingeka siqondise ngesandla ibanga lesistimu yokugxila, isici sokugxila kokuthinta asisebenzi ngekhamera enkulu, lokhu kungabhekwa njengento enzima kancane.
Ngemuva kwezinyanga ezi-3 ngithola i-Galaxy A71, noma ngingajabulile ngempela, ngisazizwa ngigculisekile impela. Mhlawumbe lena i-smartphone yebanga eliphakathi engithanda kakhulu kusukela kwa-Samsung kuze kube manje: Idizayini ekhangayo, kancane ibheke kuma-smartphones asezingeni eliphezulu, isikrini esithophayo (ngiwuhlobo oluthanda imibala egqamile).
Ngaphandle kwalokho, umthamo webhethri omkhulu wedivayisi ungenza ngizizwe ngihlabeke umxhwele futhi ngifune ukukhetha i-A71 njengefoni ezosetshenziswa isikhathi eside. Isizathu sokuthi ngisho lokho yingoba ngivame ukusebenzisa ifoni yami emsebenzini futhi ngivame ukukhohlwa nokuletha ishaja. Ukucushwa akubalulekile kakhulu ngoba anginaso isidingo sokudlala imidlalo kanzima futhi kaningi, kodwa okuhlangenwe nakho kwangempela kungaphezu kokwanele, ngisho noma udlala imidlalo.
Ikhamera ye-Galaxy A71 iyisithuthukisi esikhulu ngempela uma iqhathaniswa namadivayisi adlule aphakathi nendawo anokulungiswa okuphezulu, amakhono ahlaba umxhwele ezithombe ezinkulu kanye nezici eziningi ezithuthukile zokuthatha izithombe, ezifanele labo abathanda ukuthatha izithombe.
Njengamanje, i-Galaxy A71 ithengiswa ngenani elincomekayo kakhulu kumaCellphoneS, kuphela I-VND 8,400,000uma unentshisekelo, ungachofoza ngokushesha inkinobho ye-oda elibomvu ngezansi.
THENGA MANJE I-GALAXY A71 INANI ELIHLE!
Xem Thêm Mua Samsung Galaxy J3 Pro Công Ty Nguyên Seal Giá Rẻ | Muasalebang
Cách trị nám bằng lá tía tô tiết kiệm và hiệu quả ngay tại nhà | Muasalebang
Cách nấu lẩu mắm cá linh siêu ngon tại nhà đậm chất miền Tây | Muasalebang